မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: July 2012
Posted by Mr Htay Tint at 3:56 PM0comments
စိတ်မကောင်းစရာ ဒီအကြောင်းကို ပြန်ပြောရတာက အဲဒီအချိန်က စခန်းရှိကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆင်းရဲခေါင်းပါးလှတဲ့ အချိန်မှာ လူလည်လူလိမ် ဇော်ဦး တယောက်ကတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်နေနေ ကိုယ်သက်သာရာ သက်သာကြောင်း
ကောင်းကောင်းနေ ကောင်းကောင်းစားရဖို့ အရှက်မရှိ အဲဒီလို လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိစေချင်လို့ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
ထိုကဲ့သို့ ABSDF ရဲဘော်များအပေါ် ခုတုံးလုပ်ကိုယ်ကျိုးရှာ အမြတ်ထုတ်သွားသည့် ဇော်ဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ပြီး သတင်းမီဒီယာကို အသုံးချ၍ သူသည် ABSDF ခေါင်းဆောင်ဟု ပြောသည်ကို ကြားရသည့်အခါ ကျနော်အပါအဝင် ရဲ ဘော်များ အလွန်ခံပြင်းဒေါသ ထွက်ခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရဲဘော် ရဲမေများ အားနည်းချက်၊ ငွေကြေး ချို့တဲ့မှုများကို အခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည့် တကိုယ်ကောင်းသမား၊ တော်လှန်ရေးရဲဘော်၊ ရဲမေများများအပေါ် စည်းမထားဘဲ လူမှုရေးအရ
အကျင့်ပျက်ဖေါက်ပြန်နေသော ဇော်ဦးအကြောင်းကို၊ ကိုအောင်သူငြိမ်း တို့ (ယခု ဗဟုအဖွဲ့ဝင်များ) မှ သိရှိပြီး စခန်းတွင် စတင်ဆန့်ကျင်လာပြီး ပြဿနာများ တက်လာခဲ့သည်။
ဇော်ဦးနှင့် သူပေးကျွေးထားသော အခွင့်ထူးခံအဖွဲ့နှင့် အခြေအတင်ဖြစ်ပြီးနောက် စခန်းမတည်မငြိမ် စဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဇော်ဦးအား စခန်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မှ ဖြုတ်ချကာ အောင်သူငြိမ်းအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တင်ခဲ့သည်။
ဗဟိုမှ တာဝန်ရှိသည့် ဒေါက်တာ သောင်းထွန်းမှ လာရောက်စစ်ဆေးရာ ဒညတမှ ပိုက်ဆံများယူပြီး လူတွင်ကျယ် လာ လုပ်သည့် ဇော်ဦး ကြောင့် ထိုပြဿနာများဖြစ်သည်ကို သိရှိသွားသည်။ ထို့အတူ စခန်းမှ လူများသည်လည်း ဖရိုဖရဲဖြစ် ကာ ဒုက္ခသည်လျှောက်သူများ၊ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်သူများ၊ အခြားစခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ သူများ၊ စခန်းမှ ထွက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ
တွင်းသို့ ၀င်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ အများအပြားဖြစ်လာပြီး စခန်တွင် မိုးဗြဲဒယ်အိုး (၆) အိုးချက်ကနေရာမှ (၂) အိုးသာ ချက်ရတော့သည့် အဖြစ်သို့ ရောက်ခဲ့ရသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ငွေကြေးတောင့်တင်းသည့် ဒညတအဖွဲ့တွင် လျှို့ဝှက်အဖွဲ့ဝင်ဘဝမှ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဗြောင် လုပ်ကိုင်လာသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဇော်ဦး ဒညတ တွင် နေထိုင်စဉ် ကာလတွင်လည်း အောက်ခြေရဲဘော်များအား ထိုင်းရဲမှ မကြာခဏဖမ်းခံရချိန်တွင် ဇော်ဦးမှ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်အတု (Passport) ကို သူကိုယ်တိုင် အတုလုပ် ကိုင်ပြီး (Passport) အတုများကို ထည်လဲကိုင်ဆောင်နေသဖြင့် ရဲဖမ်းခြင်းမှ လွတ်အောင်နေခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဇော်ဦး ဒညတ ၀င်ရောက်သွားသည်နှင့် ဒညတတွင်လည်း ငွေကြေးချစားမှုများ၊ မညီညွတ်မမျှတမှုများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာ ကာ အောက်ခြေရဲဘော်များဖြင့် ညီညွတ်ရေး ပြိုကွဲခဲ့ကြရသည်။
၎င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုဖိလစ်မောင် (Phil Maung) (အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဘွဲ့မရသူ) ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ စီးပွား ရေးကျနေချိန်တွင် သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်၍ အအောင်မြင်ဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦး ဖြစ်လာသည့် အတွက်ကြောင့် အမေရိ ကန်သမတ အိုဘားမားနှင့် လွတ်တော်အဖွဲ့တို့မှ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ဂုဏ်ပြု၍ စီးပွားရေးပညာရှင်ဟု သတ်မှတ် လိုက်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်တွင် ခေတ်နောက်ကျနေသည့် အတွေးအခေါ် တချို့ကို ယနေ့အချိန်ကာလမှာ ပြင်သင့်သည်ကို ပြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
နောင်အနာဂတ်တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားချိန်တွင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဖေါ်ပြပါ မစင်စားသံကောင်များကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြု အကျင့်ပျက်ချစားနေသူများအား မိမိအနေဖြင့် ဆက်လက်ဖေါ်ထုတ် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Mr Htay Tint at 3:19 AM3comments
ဟစ်ပေါ့ အဆိုတော် ဇေယျာကျော်
မူလက သူ့ ကို အဆိုတော်ချာတိတ်
ပြင်သစ်က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အုပ်စုကို
ရှိထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့အားလုံးလက်ခံနိုင်အောင် တင်ပြနိူင်တယ် ။
ပြည်သူလူထု အတွက် ဦးဆောင်နိူင်မည့်သူလို့ 
ယုံကြည်လို့ဗီဒီယိုလုပ်ပြီး ဖြန့် ပေးလိုက်တယ် ။
Posted by Mr Htay Tint at 4:32 AM0comments
ပါရီမြို့ ကြီးသူဆု လက်ခံတဲ့ အခန်းအနား
ပါရီမြို့ စားကြီး Bertrand delanoë ဆုမွန်လွှာ
by Htay Tint on Saturday, June 30, 2012 at 11:42am ·
ပါရီမြို့ ကြီးသူဖြစ်လာမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီနေရာကို ကြွရောက်လာခြင်းသည်
အသင်တို့ အားလုံးနှင့် တွေ့ ဆုံရန်ဖြစ်ပါတယ် ။ အသင်တဦးတည်းအတွက် လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ ။
ကျေးဇူးပြုပြီး လာရောက်ဂါဝရပြုသူအားလုံး မြင်တွေ့ စေရန် အတွက်
သင်တို့ မေတ္တာကို အခြားသူများကို ဝေမျှ ပြသရန် အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် အခြားသူတဦးကိုလည်း ဂါဝရပြုလေးစားဖို့ လိုအပ်နေပါတယ် ။
Aung Khaing Myint, Su Per, Tun Wai and 8 others like this.
Aung Khing မှတ်တမ်းတင်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Zaw Myo Lwin Thanks and shared!
Aung Khaing Myint Please let me share in blog.thanks.http://8888newgenerations.blogspot.ca/2012/07/bertrand-delanoe.html#links
New Generations: ပါရီမြို့ စားကြီး Bertrand delanoë ဆုမွန်လွှာ
Aung Khing ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
အမေစု နှင့် မြန်မာတွေ ရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးကြတယ် ။
အမေစု လန်ဒန် ပြင်သစ် ရေအောက်ရထားပေါ်က ရောက်လာပြီ ။
Posted by Mr Htay Tint at 4:05 AM0comments